ဖူးနုသစ်: စစ်တုရင် ကစားသမားနှင့် စိတ်ကူး အပိုင်းအစများ
ကက်စပါးရော့နဲ့ Deep Blue စစ်တုရင်ထိုးတာကို ကြားဖူးပေမယ့် သမန်ကာ လျှံကာပါပဲ..
ခုမှ သေချာဖတ် သွားပါတယ်..
အရှေ့မြို့ရိုးမှ မိုးရေစက်များ ကိုလည်း တကယ်ကို သတိရသွားပါတယ်.
အရှေ့မြို့ရိုးမှ မိုးရေစက်များကိုလည်း ကြိုက်တယ် ..
စစ်တုရင်ကစားရတာကိုကြိုက်တယ်။ “အရှေ့မြို့ရိုးမှ မိုးရေစက်များ”ကိုလည်း ကြိုက်တယ် ။ ဒီ post ကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ် ။
ဘလော့ဂါတွေအနေနဲ့ စစ်တုရင်ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့တော့လွယ်မယ်ထင်တယ် ...(ကြာကြာထိုင်နိုင်ကြလို့) .....း
ဗဟုသုတတွေ ကောင်းကောင်းရသွားတဲ့ပို့စ်တခုပါ ...
ကျေးဇူး .... ကိုZT
Ohh.. Nice Post!
စစ်တုရင်ပွဲအကြောင်းတော့ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ လူက နိုင်တဲ့အထိပဲ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အမှတ်နဲ့ ရှုံးသွားတဲ့ ဒုတိယ အကြောင်းကတော့ ခုမှ ဖတ်ဖူးတော့တယ်။
EgaleEye ကြည့်တုန်းကတောင် တွေးမိသေးတယ် စက်ရုပ်ထဲ အသိညာဏ်ထည့်တဲ့လူက အပြင်မှာကော ဘယ်လိုများ ဖြစ်မလဲဆိုပြီး (တကယ်သာရှိခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပါ) စက်ရုပ်ကို လူအပေါ် မမှီခိုအောင် လုပ်ရင်းကနေ လူတွေရဲ့စိတ်တွေများ (e.g. မိမိသာ ထီးထီးဖြစ်လိုတဲ့စိတ်) တအားထင်ဟပ်ကုန်သလားလို့ :D
ZT ရေ ထုံးစံအတိုင်း ဗဟုသုတ အများကြီးရသွားတယ်.. ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လာဖတ်တာ... နဲနဲ နှေးတယ် :P
Tun Zarni Kyaw said...
ဒါဖတ်ပြီးမှ ကျွန်တော်လည်း စစ်တုရင် အကြောင်းတွေရေးဖို့ သတိရသွားတယ် :)
Rich knowledgeable. Thanksalot.